Lahatsary malaza haingana maneso ny fanandratana an’i Potinina tafahoatra · Global Voices teny Malagasy
Nifanehatra tamin'ny sarigoavan'ny filohany tao amin'ny fanaka-drihana ny mponin'i Moskoa
Voadika ny 16 Avrily 2020 5:11 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, українська, Italiano, English
Pikantsary avy amin'ny lahatsary malaza an'i Dokhov ao amin'ny YouTube, mampiseho ilay bilaogera manantona ny sarintavan'i Putin ao amin'ny fanaka-drihana.
Efa mihoatra ny taompolo roa izao i Rosia no teo ambany fitondran'ny Filoha Vladimir Potinina ka mbola hita ho miraikitra aoka izany ny fanandratana azy, dia mamaly amin'ny hanihany ratsy sy fanesoana efa mampiavaka azy kosa ny olon-tsotra rosiana. Ohatra iray lavorary hanehoana izany indrindra ny lahatsary iray, naharenoka ny RuNet.
Tany am-piandohan'ny volana febroary 2019 ny bilaogera rosiana Bashir Dokhov no nanantona ny sarintava goavana iray an'i Potinina tao amin'ny fanaka-drihana (ascenceur) iray tao amin'ny toeram-ponenana iray maro rihana tao Moskoa. Avy eo izy nametaka fakantsary iray handraketana ny fihetsiky ny mponina gaga.
Ho an'ireo miteny Rosiana, indro ny lahatsoratra ôrizinaly sy amin'ny endriny lava, navoaka ho ao amin'ny fantsona YouTube GrannyBlog tamin'ny 5 febroary. Efa nahitana jery mihoatra ny roa tapitrisa ilay lahatsary tamin'ny fotoana namoahana ny lahatsoratra teny anglisy:
Ho an'ireo mila teny anglisy, indro ny endrika nohafohezina sady ahitana dikantsoratra teny anglisy:
Rosiana mpamandrika-sady-mpananihany iray nametaka sarintava lehibe iray an'ny Filoha Vladimir Potinina tao amin'ny fanaka-drihan'ny fanorenam-ponenana iray. Avy eo izy nametaka fakantsary handraketana ny fihetsiky ny olona.
Feno fanehoan-kevitra manohana ny hevitr'ilay bilaogera sy ny fitsikerany ankarihary an'i Potinina teo ambanin'ilay lahatsary YouTube. Manoratra ny mpisera iray:
Tena raitra!!! Fitsapan-kevitra tsara indrindra tamin'izay fantatro! Ary hitako hoe izay (mahatoky) tsy mamitaka indrindra!
Nilaza i Dokhov tao amin'ny antsafa nifanaovana tamin'i Ekho Moskvy tamin'ny 10 Febroary fa tsy nanangona manokana ireo valiny izay mitsikera an'i Potinina izy, saingy maro kosa ireo tsy namaly mihitsy, “na tsy nilaza na inona na inona fa naka selfie.” Nihomehy ny vehivavy ary tolagaga ny kilonga. Maro ny lehilahy no niamboho avy hatrany ny filoha, sady nihidivazana nanompa, amin'ireo karazany maro dia maro antsoina hoe mat’, izay be mpampiasa saingy voararan'ny lalàna ao Rosia rehefa miseho ampahibemaso. Fihetsika iray mora tsarovana ny an'ny vehivavy lazondazony iray izay nitodika nijery ny mason'i Potinina ka niteny hoe “Fantatro izay mitranga; misy fakantsary aty. Misy manara-maso izahay!”
Rehefa nahasarika ny fifantohan'ny olona ilay lahatsary, dia nivoaka tao amin'ny Twitter ny siosion-dresaka fa nosamborina i Dokhov fa “tsy manaja ny manampahefana.” Tao amin'ny antsafa iray nifanaovana tamin'ny BBC amin'ny teny rosiana tamin'ny 10 Febroary ilay bilagera no nanamafy fa diso izany siosiondresaka izany. Na izany aza, ahitana mazava ny fihetsiky ny olona manoloana ilay lalàna mampiady hevitra hoe “tsy misy fanajana” ny faneken'ny olona avy hatrany izany lalàna izany.
Nandritra io antsafa io ihany, nanontaniana an'i Dokhov ilay fanontaniana tany amin'ny rehetra tany: Ahoana no nahatongavany tamin'io hevitra hafahafa io? Izao no namaliany azy:
Matetika aho no nanontaniana an'i, saingy tena sarotra dia sarotra ny mamaly hoe ahoana ny nahatongavan'ny hevitra. Tonga ho azy amin'izao. Nanontany tena aho amin'ny hoe ahoana ny hanaovako fitsapan-kevitra ara-piarahamonina ka tsy hanao ilay manatona anao ny olona ary hiteny hoe “Foibe Levada! Mitenena!” [ivotoeram-pitsapan-kevitra rosiana malaza — ed.] Fantatra fa avy any an-tranony ny olona no tena miaritra. Ka nahaliana ahy ny hanao azy ity mba ho tena tsy mandainga ny fihetsiky ry zareo.
Ny fanaka-drihana no noheveriko, mba hahatongavana amin'ny karazana hadalana. Satria raha natao tao an-dalantsara io, dia mety hieritreritra ny olona hoe “ie, mazava loatra, izao no endriky ny firenena iainantsika.” Fa tena fahadalana tanteraka kosa ny fanaka-drihana. Satria amin'ny fahangezan'ilay sarintava dia tonga dia feno azy ny fanaka-drihana, ary dia ao anatin'ny hanihany tanteraka ilay izy. Ary tafiditra avy hatrany ny olona: “ahoana, tena izao ve?” Tahaka izay ny fomba nisainako azy.